Rut 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
3 Neomi nne di ya wee sị ya: “Nwa m, ọ̀ bụ na mụ ekwesịghị ịchọtara gị ebe izu ike,+ ka ihe wee gaziere gị? 2 Ọ̀ bụ na Boaz, onye gị na ụmụ agbọghọ ya nọworo, abụghị onye ikwu anyị?+ Lee! N’abalị taa, ọ ga na-afụcha ọka+ bali n’ebe nzọcha mkpụrụ. 3 Ị ga-asa ahụ́, teekwa mmanụ+ ma yiri uwe gị+ gbadaa n’ebe ahụ a na-azọcha mkpụrụ. Emela ka nwoke ahụ mata na ị nọ n’ebe ahụ ruo mgbe o risịrị nri ma ṅụsịa ihe ọṅụṅụ. 4 Ọ ga-erukwa na, mgbe o dinaara ala, ị ga-ahụwa ebe o dina ama; gaa kpughee ákwà o ji kpuchie ụkwụ ya, dinarakwa ala; ya onwe ya kwa ga-agwa gị ihe ị ga-eme.” 5 O wee sị ya: “M ga-eme ihe niile ị gwara m.” 6 O wee gbadaa n’ebe ahụ a na-azọcha mkpụrụ, meekwa ihe niile nne di ya nyere ya n’iwu. 7 Mgbe ahụ, Boaz riri ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ, obi wee dị ya ụtọ.+ O wee gaa dinara ala na nsọtụ ebe e kpokọtara ọka. Mgbe o dinaara, Rut ji nwayọọ bịa kpughee ákwà o ji kpuchie ụkwụ wee dinara ala. 8 O wee ruo n’etiti abalị na nwoke ahụ malitere ịma jijiji. O wee bilie nọrọ ọdụ, ma, lee! otu nwaanyị dina n’akụkụ ụkwụ ya! 9 O wee sị: “Ònye ka ị bụ?” O wee sị: “Abụ m Rut ohu gị nwaanyị, gbasaa uwe mwụda gị kpuchie ohu gị nwaanyị, n’ihi na ọ bụ gị ga-agbara m.”+ 10 O wee sị: “Ka Jehova gọzie gị,+ nwa m. I gosiwo obiọma*+ gị n’ụzọ dị mma n’ihe a i mere ugbu a karịa nke mbụ i mere,+ ebe ị na-achụrụghị ụmụ okorobịa gawa, ma hà bụ ogbenye ma hà bụ ọgaranya. 11 Nwa m, atụla egwu. M ga-emere gị ihe niile i kwuru,+ n’ihi na mmadụ niile nọ n’ọnụ ụzọ ámá nke ndị m maara na ị bụ ezigbo nwaanyị.+ 12 Ọ bụ ezie na m nwere ike ịgbara gị,+ e nwere onye ga-agbara gị nke bụ́ onye ikwu gị karịa m.+ 13 Nọrọ n’ebe a n’abalị a, ọ bụrụ na o ruo ụtụtụ, ọ bụrụ na ọ gbara gị,+ ọ dị mma! Ya gbarawa. Ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịgbara gị, dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ mụ onwe m ga-agbara gị. Dinara ala ruo ụtụtụ.” 14 O wee dinara n’akụkụ ụkwụ ya ruo ụtụtụ ma bilie tupu onye ọ bụla enwee ike ịmata ibe ya. O wee sị ya: “Emekwala ka a mara na nwaanyị bịara n’ebe a na-azọcha mkpụrụ.”+ 15 O wee sị ya: “Chịta ákwà mgbokwasị ahụ i gbokwasịrị, gbasaa ya.” O wee gbasaa ya, o wee manye ya ọka bali nke dị ihe ọ̀tụ̀tụ̀ sia isii wee bo ya, nwoke ahụ wee banye n’obodo. 16 O wee lakwuru nne di ya, bụ́ onye sịrị: “Ònye ka ị bụ, nwa m?” O wee gwa ya ihe niile nwoke ahụ meere ya. 17 O wee sị ya: “Ọka bali a nke dị ihe ọ̀tụ̀tụ̀ sia isii ka o bunyere m, n’ihi na ọ sịrị m, ‘Agbala aka lakwuru nne di gị.’”+ 18 O wee sị: “Chere, nwa m, ruo mgbe ị maara otú okwu a ga-esi gaa, n’ihi na nwoke ahụ agaghị ezu ike ọ̀ gwụla ma ò mere ka okwu a bie taa.”+